နို့ဆူးပင်ကိုရေနံ immunomodulating, အနာသည်အနာပျောက်စေသော, Anti-inflammatory choleretic နှင့်တီးရီးယားရောဂါပိုးသတ္တိလည်းရှိတယ်။ ဒါဟာအောင်မြင်စွာအများအပြားဝေဒနာတွေ၏ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးနှင့်ပြည့်စုံသောကုသမှုများအတွက်အသုံးပြုသည်။ ဒါပေမယ့်ဘယ်လိုအများဆုံးအကျိုးသက်ရောက်အောင်မြင်ရန်တိုသက်တမ်းအတွက်ဒါ, နို့ဆူးပင်ကိုရေနံလုပ်ပေမယ့်မဆိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးပေါ်လာမလာတာလဲ?
အသည်း function ကိုတိုးတက်စေရန် 8 ml ကိုတစ်နေ့လျှင်နှစ်ကြိမ်နေ့စဉ်ဆူးပင်ကိုရေနံကိုမသောက်သင့်ပါတယ်။ ဤသည်အကောင်းဆုံးသင်တို့သည်စားမည်သို့အချိန်တွင်ပြုသောအမှုဖြစ်ပါတယ်။ အသည်းခြောက်ခြင်းနှင့်အသည်းရောင်အသားဝါဘီ, ပြင်းထန်သောနှလုံးနှင့်သွေးကြောရောဂါများနှင့်အမျိုးမျိုးသောအသည်းထဲတွင် tool ကိုပျက်စီးစေခြင်းသာရှုပ်ထွေးသောကုသအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုလတစ်ရက်စဉ်အတွင်း4ml ကိုသုံးကြိမ်အဖြစ်အသုံးပြုပါသည်။
ဆူးပင်ကိုရေနံကနေတစ်ဆင့်ကုသပေးဖို့ ချုပ် , က (ကန့်ညက်မတိုင်မီလိုအပ်သော)6mL နေ့စဉ်အနည်းဆုံး3ကြိမ်မျိုချမိရမည်ဖြစ်သည်။ အမျိုးမျိုးသောအအေးမိတားဆီးနိုင်ရန်အတွက်ကြောင့်7ml ကိုတစ်နေ့လျှင်နှစ်ကြိမ်သောက်ရန်အကြံပြုသည်။ နိမ့်ဆုံးကုထုံးအရှင် 1 လဖြစ်သင့်သည်။
ဘန်း, နှင်းခူ နှင့် psoriasis အဖြစ်မကြာခဏသင်ဤ tool ကိုပိတ်ကျဲစ compress နှင့်အတူလုပျနိုငျအဖြစ်အတွင်း၌ရေနံ ယူ. ဆူးပင်ဖို့လိုအပ်၏။ ဤသည်ကိုတစ်ပြိုင်နက်လူနာများ၏ကိုယ်ခံစွမ်းအားစနစ်တိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်, လုံးဝရောဂါကုသပေးဖို့အချိန်တိုတောင်းတဲ့ကာလအတွက်အသားအရေနှင့်ရောင်ရမ်းခြင်းကိုဖယ်ရှားပါလိမ့်မယ်။
အလေးချိန်ဆုံးရှုံးမှုများအတွက်ဆူးပင်ကိုရေနံတစ်အရည်အဖြစ်နှင့်ဆေးတောင့် form မှာယူနိုင်ပါသည်။ ဒါဟာခန္ဓာကိုယ်ကနေပိုလျှံရေများဖယ်ရှားရေးကိုအထောက်အကူပြုရန်ဖြစ်ပါသည်ကောင်းစွာအစာစားချင်စိတ်လျော့နည်းစေခြင်းနှင့်ဇီဝြဖစ်ပုံမှန်။ အဆိုပါတောင့ညွှန်ကြားချက်အတိုင်းအသုံးပြုရမည်။ ဒါပေမယ့်တစ်ဦးမဟုတ်ဘဲကြီးမားသောကယ်လိုရီရှိတယ်ကြောင့်၎င်း, အရည် form မှာနို့ဆူးပင်ကိုရေနံကိုယူဖို့ဘယ်လိုမှန်ကန်စွာ? ဒါဟာတော်တော်လေးရိုးရှင်းပါတယ်။ ဒီ tool က7တစ်နေ့လျှင်နှစ်ကြိမ် ml (ဖြစ်နိုင်ရင်နံနက် veserom အတွက်) နှင့်သုပ်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များဖြည့်သည့်အခါရေနံနေရာတွင်အစားထိုးသောက်ရသင့်ပါတယ်။
အရွယ်ရောက်ပြီးသူများတွင်အပူပိုင်းချောင်းဆိုး - ရိုးရာကုစား၏ကုသမှု
Burnet - ဆေးဖက်ဝင်ဂုဏ်သတ္တိများနှင့် contraindications
ကြက်သွန်အခွံတစ် decoction - အကျိုးခံစားခွင့်များနှင့်ပျက်ဆီး
တရုတ်ဆေးပညာ - ရိုးရာနှင့် Non-ရိုးရာချဉ်းကပ်၏လျှို့ဝှက်ချက်များ
ရည်အတွက် Cranberries - စာရွက်
ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဘဝ Eddie Redmayne
ငါမိန်းကလေး tampons အသုံးပွုနိုငျသနညျး
ကွန်ကရစ်လုပ်ထားတဲ့ဇယားထိပ်ဆုံး - သူတို့ရဲ့လက်နှင့်လုပ်နေတာ
Gigi Hadid ကမ်းလှမ်းချက်ကို Zayn Malik လက်ခံခဲ့သည်
Kefir - အကျိုးကျေးဇူးများနှင့်ပျက်ဆီး